Shiinaha Gawaarida boorsada qaboojiyaha Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dibedda > Boorsada qaboojinta
(1) 600D oo lagu sameeyay Oxford (2) Kuleylinta iyo boorsada qaboojiyaha: Qalabka kuleylka kuleylka ah ee kujira boorsada qaboojinta iyo dahaadhka cadeynta daadinta ayaa wada shaqeynaya si loo hubiyo kahortaga daadinta iyo in cunnadu ahaato mid kulul iyo qabow ilaa 16 saacadood. (3) Awood qaboojiye weyn: 13.0 inji x 7.5 inji x 15.8 inji / 33 cm x 19 cm x 40 cm (dherer x ballac dherer ah), culeys: 1.1 lbs / 500 g, wuxuu xajin karaa ilaa 30 qasacadood (330 ml), Hayso ku filan (4) Jeebno badan: 1 qol weyn oo waasac ah oo waasac ah, 2 jeebka mesh dhinac ah, 2 jeebabka waaweyn ee jiinyeerka ah oo lagu keydiyo weelasha, 1 jeebka jeebka ah (daboolan), 1 jeebka mesh iyo 1 dhalo fur biir ah.
1. Boorsada qaboojinta product introduction:
(1) 600D lagu sameeyay Oxford
(3) Qaboojiyaha awoodda weyn: 13.0 inji x 7.5 inji x 15.8 inji / 33 cm x 19 cm x 40 cm (dherer x ballac dherer ah), culeys: 1.1 lbs / 500 g, wuxuu xajisan karaa ilaa 30 gasac (330 ml) , Hayso meel kugu filan oo aad kula kulanto dhammaan baahiyahaaga.
(4) Jeebno badan: 1 qol weyn oo waasac ah oo waasac ah, 2 jeebno mesh dhinac ah, 2 jeebbada hore ee waaweyn oo loogu talagalay keydinta maacuunta, 1 jeeb jiinyeer (daboolan), 1 jeebka mesh iyo 1 dhalo furaha biirka.
(5) Mid khafiif ah oo adkeysi leh: oo ka samaysan dhar aan biyuhu adkeysan karin, boorsada ugu fiican ee miisaanka leh qaboojiyaha, ayaa loo isticmaali karaa shaqada, dalxiisyada, safarada wadada / xeebta, socodka, kaamaynta, baaskiil wadista, waxaa loogu talagalay ragga iyo dumarka Hadiyadda ugufiican.
(6) Hawlo badan: Naqshadeynta casriga ah ee kuleylkayaga iyo boorsada qaboojinta ayaa ka dhigeysa sidoo kale in loo isticmaali karo boorsada qadada ama boorsada maalinlaha ah. Kufiican qadada, jimicsiga, shaqada ama safarka.
(7) Haddii aad xiiseyneyso safarrada jidadka / xeebta, dalxiisyada ama dalxiisyada maalinlaha ah, qaboojiyaha boorsada ee TOURIT ayaa ah wehelkaaga ugu fiican ee howlaha kala duwan ee bannaanka.
(8) Si loo hubiyo inaad dareento raaxada ugu dambeysa iyo rarka, waxaan si gaar ah fiiro gaar ah u siinay suumanka garba duuban iyo dhabarka dambe ee boorsada dahaaran.
(9) Naqshadeynta casriga ah ee boorsadeena dahaaran ayaa ka dhigeysa sidoo kale in loo isticmaali karo boorsada qadada ama boorsada maalinlaha ah.
(10) Qalabka qaboojiyaha bacda daaqa leh, waxaad maalin la qaadan kartaa qoyskaaga oo waxaad ku raaxeysan kartaa cabbitaanka xeebta ama doonta.
2. Boorsada qaboojinta product parameters (specifications)
Dhererka 40cmX Width 33cmX Dhererka 19cm
3. Waa maxay boorsada qaboojiyaha?
(1) Boorsada qabow ee la daadiyey, oo sidoo kale loo yaqaan boorsada qaboojiyaha, waa boorso u eg-boorso oo leh meel gudaha ku kulushahay kuleyl badan, taas oo cabbitaanka iyo cuntada ku hayn karta heerkul hoose muddo dheer.
(2) Iyagu waa kuwo aad u habboon, fudud in la qaado, waxaana loo isticmaali karaa ku dhowaad safar kasta oo dibedda ah ama shaqo dheer. Marka laga yaabo inaadan awoodin inaad isticmaasho qaboojiyaha ama qaboojiyaha, tani waa hab fiican oo lagu hubiyo in wax kasta oo aad wadato ay ahaadaan kuwo cusub.
4. Shaqooyin noocee ah ayaad ka raadin kartaa ilaalinta kuleylka iyo boorsada qaboojiyaha?
(1) Markaad iibsaneyso boorso dahaaran oo qaboojiye ah, waa inaad marka hore xaqiijisaa inay runti tahay dahaadh ayna leedahay meel ku filan oo lagu keydiyo dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay.
(2) Qaar ka mid ah boorsooyinka qaboojiyaha waxay isticmaalaan naqshad kala qaybsan, halka kaliya hal dhinac la dahaaran yahay, dhinaca kalena uu ku jiro heerkulka qolka.
(3) Kani waa mid waxtar badan u leh dadka qaada waxyaalaha kale ee aan halaabi karin (sida laptop-ka, buugaagta, buugaagta carruurta, iwm). Tani sidoo kale waa faa iido marka boorsada qabow ay leedahay jeebado dheeri ah oo lagu keydiyo cabitaanka xitaa banaanka.
(4) Arrin kale oo muhiim ah oo laga fiirsado ayaa ah miisaanka (taasi waa, gudaha gudihiisa kuma buuxsamo tan). Sida boorsooyinka caadiga ah, boorsooyinka qaboojiyaha ayaa badanaa culeyskoodu u dhexeeyaa 4 ilaa 10 rodol, laakiin sifooyinkooda caymiska awgood, waxay u muuqdaan inay ka culus yihiin boorsooyinka caadiga ah ee aan caymiska lahayn.
(5) Waa muhiim inaad tixgeliso inta aad qorsheyneyso inaad ku xirxirto boorsada qaboojinta si aad u fahamtid culeyska inta lagu jiro safarka. Raaxo waa furaha, gaar ahaan boorsooyinka dhabarkaaga lagu qaato maalin kasta.
(6) Si aan udhaho uguyaraan, waxaa jira boorsooyin badan oo dahaaran oo suuqa kuyaala oo howlaha dukaameysiga ay noqon karaan kuwo dhib badan. Waxaan halkan u nimid inaan ku caawino. Kuwani waa xulashada dahaarka ugu wanaagsan iyo boorsooyinka qaboobaha ee suuqa yaalla.
(7) Sikastaba, waxaan qaabeyn karnaa soona saari karnaa 6-da haga ee muhiimka ah xulashada boorsooyinka qaboojinta.
6. Boorsada qaboojinta packaging and delivery
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 40cm X 33cm X 19cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 43cm X 35m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 8Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 6.5Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan qaabeyn doonnaa habka baakadeynta boorsadan qaboojiyaha ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka boorsadan qaboojiyaha ah, waxaan dooran doonnaa inaan hawada kuugu soo dirno.
Adeegga iibka kadib.
S6: Ma aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
(3) Waxaan nahay soo saare Disney boorsooyinka qaboojinta, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Q7. Intee in le'eg ayey kugu qaadaneysaa inaad la xiriirto oo aad jawaab celiso?
Q8. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
Q9: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Q10aad. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
S11: Ma leedahay xad MOQ ah?
Calaamadaha kulul: Boorsada qaboojinta, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka